Tsy Ilay Fialofana Nantenain’ny Maro Ny Trano Fonenana Any Ivelan’i Havana · Global Voices teny Malagasy
Tsy Ilay Fialofana Nantenain'ny Maro Ny Trano Fonenana Any Ivelan'i Havana
Voadika ny 30 Jona 2017 8:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Ελληνικά, Español
Topimaso amin'ny toerana fonenana ao amin'ilay faritra maloto manodidina ao Indaya. Sary avy amin'i Elaine Díaz. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Ampahany manokana ho an'ny Global Voices ity lahatsoratra ity. Afaka mahita ny lahatsoratra voalohany, “Toerana Fonenan'ny Mahantra”, ato ary mamaky lahatsoratra hafa avy amin'i Geisy Guia Delis ho an'ny Periodismo de Barrio ato ianareo.
Vondrom-piarahamonina eo amoron'ny ony Quibú, andrefan'ny renivohitra Kiobana ny Indaya. Ony ny olona no mivantana rehefa avy niala ny tontolon'ny tara sy ny simenitra mba ho voahodidin'ny tontolo iray feno loto sy vovoka ary hamandoana. Ny olona izay tonga avy amin'ny faritany hafa sy mihevitra ny hiaina ao Havana no namorona io vondronà “trano” io.
Dimanjato metatra avy amin'ilay Indaya tena izy — ny iray amin'ireo fotaka sy ny trano naorina tamin'ny akora efa avy nampiasaina na ny akora nalaina tao amin'ny fako tahaka ny fanitso, temitra, na baoritra — nanorina fifanarahana hanorina trano fonenana 100 ao amin'ilay tany nasiam-panamboarana, nampitondraina io anarana io ihany, ireo orinasam-panjakana samy hafa.
Tamin'ny 2012, tonga hanala ny loto teo amin'ny toerana izay nofinidy hanaovana ny asa fanorenana ny fiara be “bulldozers”.
Tany am-boalohany, nomanin'ny Filànkevitry ny Fitantanana Isam-paritra (CPA) ao amin'ny Fahefan'ny Vahoaka mba ho vonona tamin'ny 2013 ireo trano vaovao. Nanomboka teo, teo anelanelan'ny 9 sy 14 tapitrisa pesos (9 ka hatramin'ny 14 tapitrisa Dolara Amerikana) no natokana isantaona ho an'ny tetikasa. Araka ny filazan'i Greta Rodríguez, tale lefitra ara-teknika ao amin'ny Living in Marianao, 11 tapitrisa pesos (11 tapitrisa Dolara Amerikana) no nomena tamin'ny 2016 sy nampiana:
Tian'ny fanjakana ho vita ireny trano ireny ary tsy vola kely no natokany ho an'ilay tetikasa.
Nampihemotra ilay tetikasa ny fikorontanan'ny tolotra sy ny tsy fahampian'ny mpiasa, ankoatry ny fe-potoana sarotra tanterahina izay nanitsakitsaka ny dingan'ny asa fanorenana, ary tsy mbola misy daty voatondro ho fiafaràn'ny asa.
Indaya. Sarin'i Elaine Diaz. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Araka ny filazan'i Tania Oliva, mpitondra tenin'ny Fitantanana ny Tetikasa Fanorenan-trano Sy ny Asa Vaventy Any Havana, izay mitantana ilay fanorenana, niaiky ny CPA fa mety hanohitra ny dingan'ny fanorenana izany, rehefa napetrany ho amin'ny 2013 ny andro faran'ilay tetikasa.
Ny orinasa City Design Havana (CDH) no tompon'andraikitry ny fandaminana ilay tanàna tamin'ny 2009. Nilaza i Idania Galíndez, iray amin'ireo mpanao maritrano tao anatin'ny ekipa, fa ny andiany tsirairay dia misy trano efatra to anatin'ilay tolokevitra nankatoavina tany am-boalohany: iray misy efitrano fandriana telo, iray misy efitrano fandriana roa, ary iray misy efitrano fandriana iray. Hahitana zaridaina, toerana fanaovana fanatanjahantena, ary toeram-piasana hafa ilay tanàna vaovao.
Nangataka hampiasa ireo akora tsara indrindra ilay injenieran'ny asa vaventy, René Rosabal, ary ny tetikasa nametra ny fampiasàna ireo fitaovana tsara indrindra mba hanomezana fahatezàna ho an'ilay tetikasa sy zavabita haharitra 50 taona (isa nokajian'i Rosabal)
Nanamarika ny CDH fa tafiditra ao anatin'ilay drafitra voalohany ho an'ny fanorenana tanàna ny arabe sy ny sisin-dàlana, ankoatry ny antony hafa, satria raha nanorina ireo trano tany am-boalohany izy ireo, ny hovitrovitra ateraky ny milina dia mety hiteraka triatra ary hampitombo izay mety fiantraikany mafy amin'ireo fotodrafitrasa.
Na izany aza, nanao ny fanotorana tany voalohany izy ireo, nandrakotra ny faladian-trano tamin'ny fandrakofana teknika ary tonga dia nanomboka nanorina ny trano voalohany. Talohan'ny fe-potoana, voalaza fa nahaorina trano 48 izy ireo, fa tsy tamin'ny làlana iray.
Araka ny hevitry ny ankamaroan'izay nohadihadiana, ny tena niavaka, miampy ny tsy fisian'ny traikefa sy ny fananterahana ny tetikasa ankehittriny, dia ny hatsaran'ny fitaovana natolotra. Im-betsaka no tsy maintsy nandefa fasika sy fitaovana hafa izay tsy nilaina i Olivia. Raha ambony oharina amin'ny tetik'asa fanorenana ny teti-bola amin'ity fanorenana tanàna ity, dia tsy mitombina raha toa fitaovana ratsy kalitao no raisina.
Fipoahana eny amin'ny tany. Sarin'i Elaine Diaz. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Tamin'ny 2015 no vita ireo trano voalohany. Herintaona mahery taty aoriana, tsy nisy na iray tamin'ireo nipetraka nanana antontan-taratasy manamarina fa izy ireo no tompony — ireo taratasy ilaina ho an'ny fanamboarana ny trano. Tsy fantany akory hoe ohatrinona no tokony halohany ho an'ny tranony.
Nipetraka tao amin'ny trano iray nanomboka tamin'ny 2016 i Carmelo Morejón. Rehefa avy kely ny orana, misy faritra hamandoana mitoetra eo amin'ny tafo ary ny sasany amin'izany any anaty rindrina. Tao anatin'ny volana vitsivitsy voalohany, tsy maintsy nanamboatra tatatra izy satria dibo-drano ny tokotany sy ny lakozia. Misy mitete koa any amin'ny efi-trano fandrian'ny ankizy sy ny efitrano fandroana.
Tsy mangataka amin'ny tafika mba ho avy hamaha ny olany rehetra i Morejón. Mangataka fotsiny izy mba homena ilay taratasy momba ny tranony, satria izay ihany no làlana tsy hananany olana amin'ny mpanara-maso. Amin'izao fotoana izao, isak'izay miezaka manamboatra zavatra izy dia sazian'ny mpanara-maso.
Hamandoana eny amin'ny rindrin'ny Indaya. Sarin'i Elaine Diaz. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Mitaraina i Ibrahim Masó satria misokatra any amin'ny tsy tokony ho izy ny varavarany. Misy olana hafa amin'io trano io.
Mankasitraka aho satria efa zatra nahatra aho, nefa toa ahy, misy olona izay rehefa nandray ny tranony, tsy nahalala izay tokony atao, hividy fitaovana sa hanomboka hanamboatra trano vaovao.
Nifindra trano tamin'ny volana May koa i Bárbara Díaz. Ny andro nahatongavany, afa-po be tamin'ny tafon-tranony izy, tena faly ka tsy nahasokatra ny masony raha niandrandra ny lanitra mba hanolotra fisaorana.
Telo andro taorian'ny fifindràna trano, na izany aza, nanomboka nahatsikaritra triatra teo amin'ny tafo izay nitatra nanerana ny trano i Bárbara Beg, ary tsy ela dia nanjavona ilay hafaliany. Tamin'ny volana May izany. Talohan'ny Septambra, nitriatra ny gorodona ary niendaka, ka namela lavaka teo amin'ny simenitra mafy.
Tsy ampy arofanina amin'ny tohatry ny tranon'i Bárbara. Juana Herdia, Bárbara 83 taona dia tsy mahita tsara. Ho azy sy ireo zafikeliny roa lahy, lasa toy ny fomba fandehan'ny zaza vao miana-mandeha mahavaky fo ny fiakarana sy fidinana amin'ilay tohatra.
Ambony ilay eritreritra trano fonenana, mila asa izany, na izany aza, raha tiana ho mendrika.